Home » အသားပေး » Harman: အဆိုပါ Studer Dios
Harman: အဆိုပါ Studer Dios
အဆိုပါ Studer Dios ငါ / အလိုအလျောက် software ကို routing အိုအမှတ်အသားထိမှန်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များအနေဖြင့်ခြုံငုံတုံ့ပြန်မှုကအလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ Studer Dios လက်ရှိအခြေခံအဆောက်အအုံများန်းကျင်မဆိုကန့်သတ်ဖျက်သိမ်းရေး၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ထုတ်လွှင့် Workflows အပေါ်အားကိုးရသောထုတ်လွှင့်နှင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီများအတွက််ဒီဇိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Dios ခြုံငုံစွမ်းဆောင်ရည်၏တံခါးသော့ကိုအင်္ဂါရပ်များပါဝင်သည်: I / O routing ကို, Automated pathfinding, redundancy pathfinding, Diagnostic ဆိုင်ရာအသိပေးချက်များ, baseband နှင့် IP အချက်အလက်များ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, Pre-configured I / O လမ်းကြောင်း၏ auto-စာမျက်နှာနှင့်အော့ဖ်လိုင်းဖြင့် configuration ကိုစွမ်းရည်၏စီမံခန့်ခွဲမှု
အဆိုပါစနစ်အားသက်သေ routing ကိုပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် Dios ဖြစ်နိုင်သည်ဖွစျနိုငျသောအရာကိုအမှားနေပါစေ, အထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်မီဒီယာကုမ္ပဏီလေပေါ်နေဖို့လိမ့်မည်ဟုသေချာရှိသည်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တစ်ခုတည်းဗဟိုထိန်းချုပ်မှုတို့က manged မျိုးစုံဖြစ်စဉ်များခွင့်ပြု၏အာရုံစူးစိုက်မှုကအဓိကဗဟိုအဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ Dios အော်တိုလမ်းကြောင်းကို-တွေ့ရှိချက်, I / O routing ကို၏အကြွင်းမဲ့အာဏာ redundancy များအတွက်များကိုပေးစွမ်း signal ကို routing ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖြစ်ပြီး, တစ်ခုလုံးအသံထိန်းချုပ်မှုစနစ်၏ထိရောက်မှုနှင့်ထိရောက်မှုကိုတိုးပွားစေပါသည်။ အဆိုပါ Dios ၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဘို့ခွင့်ပြု: ဝေမျှမယ်အရင်းအမြစ်များနှင့်သင့်ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများကိုခိုင်မာအောင်, သင့် Workflows ချောမွေ့, အကြီးအကျယ်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းကွန်ယက်ကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့် add သို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုဖယ်ရှားခြင်း, လွယ်ကူစွာပစ္စည်းကိရိယာများ, ဘဏ်ဍာနှင့် / သို့မဟုတ်အခွက်တဆယ်အပြောင်းအလဲများကိုဖြစ်စေလျက်, ဝေးလံခေါင်သီထုတ်လုပ်မှုရိုးရှင်း။
"I / O routing ကိုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်ဦးအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးအချိန်ကုန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး, မျှော်လင့်မထားတဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲမအောင်မြင်မှုများကိုမကြာခဏလေပေါ်နေဖို့ရန်ကြိုးပမ်းမှုအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများ routing မှအရေးပေါ်အပြောင်းအလဲများကိုမလိုအပ်" Katy Templeman-Holmes, ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းနှင့်အသံလွှင့်, Harman Professional က Solutions များအတွက်ဖြေရှင်းနည်း & Marketing ကိုဒါရိုက်တာကဆိုသည်။ "Dios, ထုတ်လုပ်မှု Workflows ရိုးရှင်း Configuration နဲ့နေ့စဉ်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းလူ့အမှားလျှော့ချ, နှင့်အစီအစဉ်များအမှားတစ်ခုဖြစ်ရပ်အတွက်လေထုအပေါ်နေဖို့ကြောင်းသေချာစေရန်ထုတ်လွှင့်အားဖွင့်, တစ်ခုလုံး I / O routing ကိုဖြစ်စဉ်ကိုအလိုအလျောက်။ ထို့အပွငျ Harman စဉ်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့စျေးကွက်တောင်းဆိုချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ Dios တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲမှစက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်များနှင့်နည်းပညာမိတ်ဖက်အတူလုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ "
baseband ကနေ IP ကိုကွန်ရက်များရန်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ငန်းစဉ်ထုတ်လွှင့်စက်ရုံထဲမှာဖြစ်ပျက်နေကြသည်အခါ, Dios လှုပ်ရှားမှုကိုကူညီပံ့ပိုးရန်အတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ format ကို Agnostic အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ, Dios စုစုပေါင်းအိုင်ပီတစ်ခု baseband အခြေခံအဆောက်အအုံအနေဖြင့်အဆင့်မြှင့်လမ်းကြောင်းကိုသင့်လက်ရှိဘတ်ဂျက်၏အရှိန်အဟုန်မှာရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခံရဖို့မြောက်မြားစွာကွဲပြားခြားနားသောစံချိန်စံညွှန်းများပြဋ္ဌာန်းချက်နိုင်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ဒီသင့်ရဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများသင့်ရဲ့အလုံးစုံစံချိန်စံညွှန်းမယ့်စီမံခန့်ခွဲဝယ်ယူရေးစေသည်။
လမ်းကြောင်းအမှားများနှင့်တိုးမြှင့ထိရောက်စွာ၏လျှော့ချရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအားလုံးအတှကျစနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Dios ကဤလုပ်ငန်းစဉ်များအလိုအလျောက်ကြောင်းသိ signal ကိုပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကာလအစဉ်အမြဲလေချွတ်ဘယ်တော့မှသောအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်။ စနစ်တစ်ခုအမှားဖြစ်ပေါ်သည့်အခါတစ်ဦးကအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းရှာတွေ့မှစွမ်းရည်ရိုးရှင်းစွာဒီဒီဇိုင်း၏အံ့ဩဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအလိုအလျောက်အဖြေရှာတဲ့အသိပေးချက်များကိုလမ်းကြောင်းများကန့်သတ်မှုသို့မဟုတ်မည်သည့်ဟာ့ဒ်ဝဲမအောင်မြင်မှုများနှင့်အတူအော်ပရေတာကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း၏ဂုဏ်အသရေ Dios လျင်မြန်စွာတစ်ဦးကို manual မှုကြီးကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေသည့်အော်ပရေတာမရှိဘဲ switch ကိုစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်သူမျှမလမ်းကြောင်းရှိရောက်နေတယ်ဆိုရင်ရရှိနိုင် Dios လမ်းကြောင်းအဆက်ဖြုတ်ဘို့အသုံးပြုသူ options များပေးလိမ့်မယ်။ လျင်မြန်စွာ, ပေးလျက်ရှိ, ဟာ့ဒ်ဝဲမအောင်မြင်မှုများနှင့် bandwidth ကိုကန့်သတ်ကိစ္စများအဘို့အဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေသင့်ရဲ့လမ်းကြောင်းအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်အတူပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရ, ပုံမှန်အားဖြင့် Third-party စတူဒီယိုထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့်အတူပါဝင်ကနဦးစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုအားထုတ်မှုကိုလျှော့ချထ Get နှင့်အတူအလျင်အမြန်ပြေး: အောက်ဆုံးလိုင်း Dios မှအသုံးပြုသူဖွဖြစ်ပါတယ် အော်ပရေတာအဖြစ်အနည်းဆုံးလေ့ကျင့်ရေးမရှိတော့ routing ကို applications များအမျိုးမျိုးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ Dios ကျဆုံးခြင်း 2017 အတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူဖို့, သွားရောက်လည်ပတ် Studer Dios ထုတ်ကုန်စာမျက်နှာ.
ဘီလီယံတစ်ဦးကျော်ကလူအခုအချိန်မှာတစ်ဦး Studer ကိုနားထောင်နေကြတယ်
Studer ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြန့်ဖြူး, စျေးကွက်နှင့်ထောက်ခံမှုအဖွဲ့အစည်းကအတူဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့အနီးရုံးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဇူးရစ်မြို့အနီး 1948 အတွက် Willis Studer ဖြင့်၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကတည်းက Studer ကိုးကွယ်မှုအသံအင်ဂျင်နီယာများ broadcast, ပြဇာတ်ရုံနှင့်အိမ်များအတွက်ဒီဂျစ်တယ်ရောစပ်စနစ်များအတွက်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသည်။ ဒါဟာ R & D အဖှဲ့အစညျးရဲ့; တစ်ဦးအတွေ့အကြုံ၏ထူးခြားသောရောစပ်နှင့်လူငယ်ဆန်းသစ်အင်ဂျင်နီယာများအစဉ်မပြတ်လူအပေါင်းတို့စိတ်တွင်တဦးတည်းရည်မှန်းချက်နှင့်အတူ, ဆွစ်ဇာလန်, ဗြိတိန်, တရုတ်နှင့်အိန္ဒိယအတွက်ခြေစွပ်ကနေအသံနှင့်အသုံးပြုသူ-interface ကိုဒီဇိုင်း၏အတားအဆီးတွန်း - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' မျှော်မှန်းချက်ထက်ကျော်လွန်ရန်။
အဆိုပါ 37s အတွက် J1960 တိပ်စက်တူသောဒဏ္ဍာရီထုတ်ကုန်များ၏နိဒါန်းနှင့် 950s အတွက် D90 ဒစ်ဂျစ်တယ် console ကိုအောက်ပါ, Studer အသံစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများဆုံးအဆင့်မြင့်အသုံးပြုသူ interfaces ရှေ့ဆောင်တော်မူပြီ အဆိုပါမူပိုင်ခွင့် Vistonics နှင့် FaderGlow တူသောနည်းပညာများနှင့်တကွ, အမှတ်တံဆိပ်လွယ်ကူသော-to-အသုံးပြုမှုနှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်ပါသည်, အစာရှောင်ခြင်း-to-သင်ယူယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့အသံ, မတူနိုင်တဲ့ဆက်သွယ်မှုနှင့်အရည်အသွေးပို့စနစ်များကိုဖော်စပ်, ရှိသမျှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖောက်သည်အထောက်အပံ့နှင့်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းကတက်ကျောထောက်နောက်ခံ။
ယနေ့ Studer ဥပမာများအတွက် Infinity Processor ကို 1,500 လိုင်းများကျော်အားဖွင့်, တဦးတည်းဆက်သွယ်မှုမှတဆင့် optical madi ၏ 5,000 လိုင်းများကျော်ပူဇော်နိုင်ပါသည်, အတိအကျဖောက်သည် '' သတ်မှတ်ချက်မှ built နှင့်အကြီးဆုံးနှင့်အရှုပ်ထွေးဆုံးထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေပွဲကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်း, အ Vista က Infinity စနစ်များကိုကမ်းလှမ်း တစ်ခုတည်း core ကိုအပေါ် I / O ၏။ ရေဒီယိုများတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရေဒီယိုနှင့်ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်အသံ consoles စများထူထောင်နှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းစံ OnAir အကွာအဝေး interconnectivity နှင့် AoIP options များ၏အကျယ်ဆုံးအကွာအဝေးကိုဆက်ကပ်။
Studer မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးအခေါ်အစဉ်မပြတ်ဆန်းသစ်ဒီဇိုင်း, အဆင့်မြင့်အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဖယ်ရှားရာမှာအရည်အသွေးအမှတဆင့်စုံလင်အဘို့ကြိုးစားကြသည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီချဉ်းကပ်မှု၏အသားတင်ရလဒ်ကျနော်တို့အသစ်နှင့် Feature-ကြွယ်ဝပြည့်စုံထုတ်ကုန်များနှင့်လေ့ကျင့်ရေးနှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ဖောက်သည်များကိုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နားထောင်ခြင်းနှင့်သင်တန်း၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနည်းငယ်နှင့်အတူသူတို့၏အတွေးအခေါ်များအကောင်အထည်ဖော်မှတဆင့်ဒီရည်မှန်းချက်သဘောပေါက်ပြီတကား
ဒီချဉ်းကပ်မှုကတဆင့်ကျနော်တို့အစီအစဉ်များ, ရှိုးများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများထုတ်လုပ်သည့်အခါထူးချွန်၏သစ်ကိုအဆင့်ဆင့်ရောက်ရှိဖို့အဆုံးစွန် tools တွေကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2017-08-17
ယခင်: Advisors အကြံပေးအဖွဲ့၏ Artel တည်ထောင်ရန်မဟာဗျူဟာဘုတ်အဖွဲ့
နောက်တစ်ခု: Phillip မမေ့ဘူးအဆိုပါချန်လှပ်ဇုန်ထဲသို့ဝင်!
ဟေ့လုပ်ပြီး Buddy !, ငါသည်သင်တို့အဘို့ဤအချက်အလက်တွေ့ရှိခဲ့: "Harman: အဆိုပါ Studer Dios" ။ http://www.broadcastbeat.com/harman-the-studer-dios/: ဒီမှာက်ဘ်ဆိုက်လင့်ခ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။